60W Okpokoro Uhie Okpukpo a na-ekpuchi ihe otiti nke 175 China Manufacturer
Nkọwa:175W Ọkpụkpụ Ngwá Agha nke Ọkara,175 Watt Metal Halide Led Retrofit,175 Watt Led Kwesịrị
Home > Ngwaahịa > Led Corn Bulbs > Led Corn Lamp > 60W Okpokoro Uhie Okpukpo a na-ekpuchi ihe otiti nke 175
175W Ọkpụkpụ Ngwá Agha nke Ọkara : Kwesịrị ekwesị maka ihe eji emechi emechi. Mee ka ọ bụrụ na ị na-eme!
175 Watt Metal Halide Led Retrofit : ETL & DLC listed.Our ETL depụtara 175 Watt Led Equivalent izute niile iwu chọrọ.
175 watt na-eduzi ngbanwe isi ihe nkedo: Ihe na-adịghị mma, Ọ dịghị arụ ọrụ na dimmer.
adabara 175 watt metal halide : super bright 130lumen / w
175 watt edu : A na-ejikarị ya eme ihe na ntinye ọkụ, ebe ụgbọala na-adọba ụgbọala, ogige, ogige, wdg.
Ngwaahịa : Led Corn Bulbs > Led Corn Lamp
E40 40W Led Corn Light Bulb 4800LM Kpọtụrụ ugbu a
60W Led Corn Light Light E27 7200LM Kpọtụrụ ugbu a
E27 80 Watt Led Corn Lens Frosted Lens Kpọtụrụ ugbu a
ETL Pyramind Led Corn Lamp 30W Kpọtụrụ ugbu a
DLC Led Corn Light 60W maka ebe ụgbọala ụgbọala Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Corn Bulb 175W Metal Halide Equivalent Kpọtụrụ ugbu a
40W Ogwe ọka 100W Ọkpụkpụ na-agbanwe ihe Kpọtụrụ ugbu a
60W Okpokoro Uhie Okpukpo a na-ekpuchi ihe otiti nke 175 Kpọtụrụ ugbu a
175W Ọkpụkpụ Ngwá Agha nke Ọkara 175 Watt Metal Halide Led Retrofit 175 Watt Led Kwesịrị 175W Mkpụrụ Na-acha Ọkụ Mmiri 100W Mkpụrụ Igwe Ọkụ Ngwá Ọrụ Ndị Ngwá Agha 120 Watts Mkpụrụ Igwe Ọkụ Mkpụrụ Igwe Ọkụ